Ladoany UK | Ny fanafarana ny fiarako
Customs Import Duty UK & VAT rehefa manafatra fiara mankany UK
Izay fiara izay ampidirina any UK dia mila diovina amin'ny ladoany
Nandritra ny traikefa an-taonany maro nifandraisany tamin'ny fomba amam-panao any UK, ny My Car Import dia nanjary manam-pahaizana momba ny fahazoan-dàlana amin'ny fadin-tseranana, manadio ireo fiara amin'ny alàlan'ny fizotrany na inona na inona izy ireo na niditra tao ivelany na ivelan'i Eropa na karazana fitaterana.
Ho an'ny fanafarana rehetra any ivelan'i Eropa, ny fitantanana ny fadin-tseranana dia misy koa ny fitantanana ny rafitra HMRC NOVA. Ho an'ny fanafarana rehetra any Eropa, dia manampy ny HMRC koa izahay ary mampandre azy ireo ny fahatongavany, mba hahazoana referansa NOVA ho an'ny DVLA.
Ny fananana manam-pahaizana momba ny fanafarana fiara mifandraika amin'ny fizotranao amin'ny anaranao dia manome antoka fa tsy misy hadisoana amin'ny karazan-dàlana fanadinana manokana izay mihatra amin'ny fiara samy hafa, miankina amin'ny taona, toerana fanamboarana, karazana fiara, tompona ary maro hafa.
Ny tanjonay farany dia ny hanamora ny fizotry ny fanafarana sy ny fanadiovana ny fomba amam-panao.
Manafatra manokana ny fiaranao ve ianao?
Ny fanafarana fiara izay ho an'ny olona tsy miankina iray dia matetika antsoina hoe 'fanafarana manokana'. Manampy amin'ny dingan'ny fanafarana ny fiaranao izahay ary araka ny fanazavana etsy ambony dia mitantana ny fizotran'ny 'fanadiovana' ny fiaranao mankany amin'ny Fanjakana Mitambatra izahay.
Ny fanafarana manokana dia hisy haba sy haba ampiharina rehefa miditra any Angletera. Tsy heverina ho fanafarana manokana izany raha toa ka mangataka fanampiana amin'ny haba amin'ny alàlan'ny tetika TOR (famindrana ny toerana onenana).
Afaka manampy amin'ny fanafarana manokana ny fiaranao izahay ary manampy amin'ny fanazavana momba ny hetra mety hitranga.
Manafatra ny fiaranao ve ianao?
Ny fitsipika mitovy dia mihatra amin'ny fanafarana fiara ho an'ny fampiasana ara-barotra afa-tsy ny laharana VAT dia takiana mba hahazoana antoka fa afaka mangataka ny VAT ianao.
Ny fizotry ny fandoavan-ketra dia tsy mitovy amin'ny fiara fivarotana fa eo an-tanana izahay hanampy anao amin'ny fangatahana rehetra.
Raha mitaky fisoratana anarana ianao aorian'izay dia afaka manampy an'io ampahan'ny dingana io koa izahay.
Mikasa ny hanafatra vonjimaika ny fiaranao ve ianao?
Raha mikasa ny hampiasa ny fiaranao mandritra ny fotoana fohy ianao any Angletera dia tsy mila hosoratana maharitra any Angletera izany.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, raha toa ny fiara any UK mandritra ny enim-bolana dia mety hafarana vetivety izy io.
Mila miantoka fiantohana anefa ny fiaranao.
Amin'ny tranga sasany, azonao atao ny miantoka an'io amin'ny takelakao isa fa ho an'ny fiara sasany dia mety mila antoka izy ireo amin'ny VIN.
Manolotra fanangonana avy any amin'ny seranana aorian'ny fahazoan-dàlana ve izahay?
Tsy toy ny masoivohon'ny fandefasana entana, izahay dia mpitaingina serivisy manompo manompo manontolo izay midika fa hitantana ny fizotrany izahay raha vao tonga any Etazonia ny fiaranareo.
Raha tsy mitandrina ianao dia mety mijanona amin'ny seranan-tsambo ny fiaranao izay mety handoavana anao mihoatra ny vidiny. Manangona fiara tsy tapaka avy any amin'ny seranan-tsambo izahay ary mahalala ny fizotrany.
Fampahalalana fanampiny momba ny famindrana ny mponina:
Ohatrinona ny vidin'ny fandefasana fiara avy any Aostralia?
Fonosana ny fiaranao?
Inona ny endrika TOR?
Inona ny famindram-ponenana UK?